लिम्वूवान - विविध सामग्री: कविता लेखन र आजीवन प्रतिपक्षमा कवि
१. विभिन्न विषय र विधाहरुका आफ्नै प्राविधिक शब्दावली हुन्छन् । कविता साहित्य, सभ्यताको सबैभन्दा पुरानो विधाहरु मध्ये एक विधा हो । यसका पनि आफ्नै प्राविधिक शब्दावली हुन्छन् । यो छुट्याउँन नसके र कविताका प्राविधिक शब्दहरू छानेर प्रयोग गर्न नसके कविताले “कविता”को स्वाभाव गुमाउँछ ।
२. कवितामा ‘विषयवस्तु’ ढुकढुकीका रुपमा आउँछ । त्यो “विषय”का पनि आफ्नै प्राविधिक शब्दावली हुन्छन् । कविले आफ्नो विषयवस्तु अनुसारका प्राविधिक शब्दावली पनि छानेर प्रयोग गर्नु पर्छ । अर्थात, कविताका ‘प्राविधीक शब्दावली’हरू र ‘विषयवस्तु’का प्राविधिक शब्दावलीहरूको सन्तुलित छनौट र संयोजन गर्न नसके कविताले आनुहार गुमाउँछ ।
३. कविता कुनै ‘शव्द’ वा ‘वाक्य’बाट सुरु हुन्छ र कुनै ‘शव्द’ वा ‘वाक्य’मा पुगेर टुंगिन्छ । अर्थात ‘श्री’ र ‘शुभम्’को एक लम्बाईमा कविले ‘कविता’ रोप्ने, स्याहार्ने, फुलाउँने, फलाउँने, पकाउँने र वाली उठाउँने काम तमाम गर्नु पर्दछ । मतलब, कहाँबाट उठान गर्ने, कुन ठाउँमा कवितालाई उत्सर्गमा पुर्‍याउँने र कहाँ कविताको बैठान गर्ने? यसको तर्कसंगत तर्जुमा कविले गर्नु पर्दछ । सामान्यतया ‘थालनि’, विचको ‘बहाव’ वा भावनागत बाढीझैँ लाग्ने ‘आरोह अवरोह’, कविताले छुन खोजेको ‘उचाई’ र ‘अन्त्य’ अरु कुनै कविले भन्दा भिन्न किसिमले गर्न नसके कविताले छुट्टै शैलीगत पखेटा हाल्दैन । ‘थालनि’, विचको ‘बहाव’, ‘उचाई’ र ‘अन्त्य’हरूको अन्तरसम्बन्धित तादत्म्यता स्थापित गर्न नसके कविताले एउटा बग्दो नदीलेझैँ ‘लयात्मक’ ध्वनीहरूको संगीत उत्पादन गर्न सक्दैन ।
४. शब्द र वाक्यहरूको हार्मोनाइजेशन कविताको अर्को सांगितीक पक्ष हो । अर्थात, कुन कुन शब्दहरू राख्ने र कुन शब्द अघि र कुन शब्द पछि राखेर वाक्यलाई संगठीत गरे कवितामा तालहरु बज्न थाल्छन् र ‘लय’ र तालले गर्दा कर्ण सुस्वादु हुन सक्दछ? भन्ने बारे पनि कवि पारखी हुनु पर्दछ । नत्र, कविता र निवन्ध उस्तै उस्तै हुन पुग्दछन् । यसमा पारख हासिल गर्न नसके कविता ढुकढुकी बिहिन मुटुको पार्थिव शरिरजस्तो हुन्छ ।
५.मिथ’को प्रयोगलाई कवितामा अत्यन्तै शक्तीशाली प्रविधीका रुपमा लिइन्छ । ‘मिथ’ र ‘कविता’ले नै रामायण प्रभावशाली सृजनाका रुपमा रहन सकेकोछ । नत्र तात्कालिन समाजमा अरु पनि ‘मिथ’ थिए होलान् । अर्थात, कवितामा ‘मिथ’को कुसल प्रयोग हुन सके ‘जादु’ चल्छ नत्र ‘कविता’ र ‘मिथ’ दुवै दुर्घटनामा पर्छन् । जस्तो कि प्रविधी (गाडी) चलाउँन नजान्नेले चलाए दुर्घटना भएर ज्यान जान्छ । कवितामा दुर्घटना भए कवि त बाच्दैन नै कविता पनि सखाप हुन्छ र पाठकका समयको निर्ममता पूर्वक दुरुपयोग हुन्छ ।
६.कविताको लम्बाइ पनि एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो । फुटकर कविता कति लामो वा छोटो हुनु पर्छ? भन्ने कुरा विषयबस्तु र शैलीमा भर पर्दछ । स्थुल विषय लिए कविता लामो हुने नै भयो । सानो विषय लिए तिक्खर किसिमले कविता छोटो हुन सक्दछ । यो कविको निर्णय शक्तीमा पनि भर पर्ने विषय हो । कोही स्थुल विषय छान्छन् त कोही सानो तर सुहाउँदिलो विषय समात्छन् र सम्प्रेषण गर्दछन् । समान्यतया फुटकर कविता ५-७ हरफदेखि डेढ पेजभन्दा लामो नहोस् भनि ठान्छु । त्योभन्दा लामो भए त्यसलाई फुटकर नभनेर ‘लामो कविता’ भन्न सकिँदो हो । मेरो विश्वास - एउटा फुटकर कविताले छोटो र सान्दर्भिक विषय लिएर गहिरो र तिक्खर कविता बन्नु पर्दछ । लामोमा भन्दा छोटोमा सम्पूर्ण कुरा अँटाउँन सक्नु पनि कविताको नभइनहुने विशेषता हो ।
७. कविता कहाँ फल्छ त? मेरो विश्वास - कविताको स्रोत जीवन नै हो । अर्थात, कविले भोगेको दु:ख-सुख, माया-मोह, मिलन-विछोड, घृणा-प्रेम, रिस-राग, आलोचना र संश्लेषण, आदि । कविले जीवनका विभिन्न पाटाहरू जिउँनु पर्दछ । कविले घरको काम, अफिस वा कमाउँने ठाउँको काम र समाजका समेत केही जिम्मेवारीहरू लिनु पर्दछ । उसले साथी-भाइसँग हाँसो र ख्याल ठट्ठा देखि लडाइँ-झगडा र फेरि सम्झऔताहरूबाट पनि गुज्रिनु पर्दछ । कहिले मलामी त कहिले जन्ति र कहिले असार पन्ध्र त कहिले पर्यटक, कहिले अनुसन्धाता त कहिले विद्यार्थी भएर अनेक कुरा ग्रहण गर्नु पर्दछ । उसले अनुभवि मानिसका अनुभवहरू (पुस्तक) पढनु वा सुन्नु पर्दछ । उसले नयाँ नयाँ ठाऊँमा घुम्ने र नयाँ नयाँ मानिसहरूसित सम्बाद गर्ने गर्नु पर्दछ । अर्थात आफ्ना प्राविधिक र समाजिक दुवै शीपहरू कविले चलाएर आफ्ना गतिबिधीहरू सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यसै सिलसिलामा कविताहरूसँग कविको भेट हुन्छ । कविले ‘कविताहरू’ मध्ये छानेर मनपरेको ‘कविता’लाई अभिलेखिकरण गरेर सबैका खपतका निम्ती राख्ने हो । कतिपय कविहरु कविता खोज्न ‘गोष्ठी’ धाउँछन् । तर कविता त्यहाँ मात्र खोजे अधुरो हुनेछ । नयाँ नयाँ कविता त जीवनकै सुख-दु:खमा फल्ने हो र जीवनकै अनुभवहरूबाट कविता सृजना गर्नु पर्दछ भनि ठान्छु ।
८. अब कुरा प्रतिबद्धताको । जीवनमा जसको पनि थुप्रै कार्यहरु हुन्छन् । ती कामहरूको प्राथमिकता तोक्ने आफैले हो । जस्तै व्यापारीले आम्दामीलाई प्रथम प्राथमिकतामा राख्दो हो । सरकारले आफ्नो कुर्सी बचाउँने कामलाई पहिलो प्रथमिकतामा राख्दो हो । प्राथमिकता अनुसार नै स्रोतको बाँड-फाँड हुने गर्छ । स्रोत भन्नाले समय, चिन्तन, मनन् र आर्थिक स्रोतको लगानी हो । जसले कवितालाई प्राथमिकताको १ नंबरमा राख्छ वा दुइ नंबर वा ३ नंबरमा राख्छ त्यसै अनुसार उसले स्रोत पनि छुट्याउँछ । अर्थात, जसले कविताको लागी सबैभन्दा राम्रो स्वास्थ्यको राम्रो मुडको राम्रो समय लगानी गर्छ भने उसले कवितालाई राम्ररी प्रथमिकतामा राखेको ठहर्छ । यसो गर्दै गए राम्रो कविता पनि जन्मन्छ । तर सबैभन्दा राम्रो समय, उर्जा र मुड अन्तै कतै लगाउँनेले कसरी राम्रो कविता लेख्ला? त्यसैले उसका कविता उसकै प्राथमिकता अनुसार बस्ने नै भए । अर्थात उच्च प्राथमिकतामा राख्नेले राम्रो कविता लेख्ने र मध्य वा निम्न प्राथमिकता दिईएकाले सोहि स्तरको कविताले लेख्ने नै भए । कुरा तीतो होला तर सत्य यही हो ।
९. कतिपय कविले ‘यो मेरो कविता आजै विहान लेखेको…’ भनेर वाचन गरेको पाइन्छ । कविले ‘कविता’लाई धेरैदिन देखि मनमा खेलाएर आज लिपीबद्ध गरेको हो भने पनि आजै कविता लेखेर आजै सुनाउँने हतारो किन? जसरी आफ्नो बच्चाको जन्म हुँदा बा-आमाले रगत, राल, सिँगान, फोहरहरू धोई-पखाली गरेर, केही सुहाउँदिलो वस्त्र ओढाएर मात्र समाजलाई देखाउँछन् त्यसै गरी कवितालाई पनि जन्मिसकेपछि केही ‘धोइपखाली’ गरेर वा (कलाको भाषामा) पलिस गरेर समाजको सामु देखाउँनु राम्रो हुन्छ । लेखिसक्ने बित्तिकै हरेक कविलाई आफ्नो कविता ‘सान्दार’ लाग्छ, बिछट्टै ‘गजबको कविता लेखेँ’ जस्तो लाग्छ । लाग्नु पनि पर्छ । किनभने यही खुशीले त कविता र कविको नाता अमर भएकोछ । तर, यो उमंगको क्षण हो । बच्चा जन्मिने बित्तिकै आमालाई लाग्ने ‘उमंग’को क्षण जस्तो क्षण हो । भर्खर बच्चा जन्मेको बेला आमाले बच्चा मात्र देख्छ । बच्चाको जीउभरिका फोहरहरू देख्दैन । जब उमंगको पहिलो आँधि कम हुँदै आमाको मनस्थिती नर्मल अवस्थामा आउँछ त्यसपछि मात्र उसले बच्चाको जिउको फोहोर देख्न थाल्छ । त्यसैगरी, कविले पनि आफ्नो कविता लेखिसक्ने बित्तिकै त्यहाँ कुराहरू दोहोरिएको, बिम्ब र प्रतीकहरू उचित किसिमले नपरेको, मिथकको प्रयोग अति भएर कविता दुर्घटनामा परेको, शब्द छनौट र वाक्य गठन नमिलेको, आदि केही देख्दैन ।
दुई घटना हेरौँ - (१) अर्नेष्ट हेमिङवेले The Old Man and The Sea लेखे । त्यसलाई पुन: लेखे । कहिले मोटो, कहिले पातलो, कहिले ठिकैको पुस्तक भयो । यसरी उनले पटक पटक पुस्तकलाई लेख्दै जाँदा २०० पल्ट पुन: लेखन् गरेछन् । त्यसपछि बल्ल उनलाई चित्त बुझ्यो र प्रकाशन गरे जुन मानव सभ्यताकै एक साहित्यक उपलब्धी र सम्पदाको रुपमा कालजयी भएर रहेकोछ ।
(२) खलिल गिब्रानले “The Prophet” लेखे । लेखेको कुरा सबैभन्दा पहिले आमालाई पढेर सुनाएछन् । उनको आमाले - 'यो निक्कै राम्रो छ । तर यसलाई अहिले नै प्रकाशित नगर । जीवनका सबै किसिमका पाटाहरू भोग, अनुभव गर र अनुभवको आधारमा फेरि यसलाई पटक पटक सच्याउ वा पलिस गर । चित्त नबुझेका शब्द फाल । सुहाउँदो नयाँ शब्दहरू थप । जब कृती तिम्रो चित्त बुझ्ने किसिमको हुन्छ अनि मात्र यसलाई प्रकाशन गर्नु ।' आमाको सुझावमा १७ वर्ष लगाएर, जीवनका अनुभवहरुको आधारमा गिब्रानले पुन:लेखन गरिरहे, पलिस गरिरहे र चित्त बुझ्दो भएपछि मात्र छापे । अहिले त्यो मानव सभ्यताको साहित्यमा एक Master peace मा गनिन्छ ।
१०. माथि (२।)मा “कविता लेख्दा ‘विषय’लाई कविताको ढुकढुकीका रुपमा कविले लिन्छ” भनेको छु । “विषय”को ‘स्थुल’ र ‘सुक्ष्म’ रुप हुन्छन् । अर्थात मोटामोटी रुपमा कवि आफुले कुन कित्तामा उभिएर लेख्ने? भन्ने कुरा कविको आफ्नो ‘अडान’ वा ‘जीवन दर्शन’सँग सम्बन्धित हुन्छ भने कविले रचना गरेका विभिन्न कृतीहरूमा फरक फरक किसिमले त्यसैको सुक्ष्म रुप पेस हुने गर्छ । जस्तो कि सेक्सपीयरले '…मानिसले भाग्यले गर्दा होइन बरु मानिस आफैले गर्ने गल्तिले गर्दा दु:ख पाउँछ । त्यही भएर साहित्य (नाटक) पनि दु:खान्त हुनु पर्छ । र, यसले दर्शकलाई पनि गहिरो छाप पार्छ…।' भन्ने आफ्नो दृष्टिकोण आफ्ना नाटकहरूमार्फत प्रक्षेपण गरे । यो जुनसुकै साहित्यकारले पनि गरेको छ । चाहे त्यो हलन्त बहिस्कार आन्दोलन गर्ने होस् वा झर्रोवादी होस् वा तेस्रो आयामेली होस् वा राल्फा होस् वा अश्वीकृत जमात होस् वा बुट पालिसवाला होस् वा तरलवादी होस् वा सडक कविता क्रान्ति होस् वा सृजनशील अराजकता वा भयवादी वा रंगवादीले होस् उसले संसारलाई र जीवनलाई हेर्ने वा बुझ्ने एउटा दृष्टिकोण बनाउँछ र त्यसै अनुसार साहित्य वा कविता लेख्छ । घोषित रुपमै मेलै पनि ‘कवि आजीवन प्रतिपक्षमा बस्नु पर्छ‘ भनेकोछु । यो मेरो ‘दृष्टिकोण’को स्थुल रुप वा अडान हो । यही मेरो स्थुल अडानको संरचना (Broader framework) मा बसेर म कविता रचना गर्दछु जुन मेरो विषयका ‘सुक्ष्म’ रुप हुन् । ‘दृष्टिकोण’को ‘सुक्ष्म’ पक्षलाई संप्रेषणीय, सुस्वादु, ग्रहणीय, बनाउँनका निम्ती आवश्यक न्यूनतम तत्वहरूको उचित सम्मिश्रण चाहिन्छ । ती तत्वहरूका बारेमा मैले माथि बुँदागत (१ देखि ९) रुपमा प्रष्ट राखेको छु । यसरी दृष्टिकोणको ‘स्थुल’ घेराभित्र रहेर ‘सुक्ष्म’ किसिमले पेस हुने कविता लेखन कार्य गर्नु पर्दछ भन्ने म ठान्दछु ।
११. 'कविता' र 'समाज परिवर्तन/रुपान्तरण' को सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? भन्ने कुरामा पनि कविहरू प्रष्ट हुनु पर्दछ । साथै आफ्नो 'सृजना' कुन किसिमको 'उत्पादन' हो र त्यसका 'उपभोक्ता' को हुन्? यो कुरा कविले ठम्याउँनु पर्छ । सबै कविता सबैको लागी हुँदैनन् । जस्तै: लोक छन्दमा लेखिएको कविता सरल भाषामा गाउँदै सुनाउँने भएकोले आम जनसमुदायमा समेत राम्ररी सम्प्रेशण हुन्छ र त्यसले तिनै स्रोताका हृदयमा छाप छोड्छ । त्यही समुदायमा वौद्धिक वा दार्शनिक गद्य कविता सुनाउँदा चाहेजस्तोगरि संप्रेशित हुँदैन र स्रोताका हृदयमा छाप छोड्न सक्दैन । जबकि त्यही वौद्धिक कविता वुद्धिजिवीहरूमाझ सुनाए राम्रो छाप छोड्छ ।
आजीवन प्रतिपक्ष किन?कवि हुनु भनेको ‘वाल सुलभ आलोचक’ वा 'प्रशंसक' हुनु हो । मन नपरेको कुरालाई निस्पक्ष किसिमले आलोचना गर्ने र मन परेको कुरालाई प्रशंसा गर्ने । जस्तै: सुन्दर फुल देखे कवि फुलको प्रशंसा गर्न थाल्छ । तर फुल नजिकै तैनाथ काँडाको घोच्ने नियतमाथि कवि आलोचना गर्छ । यसो गर्नसके मात्र कविता निश्छल हुन्छ । निश्छलता कविताको अर्को सुन्दर रुप हो । अर्थात कविले जहिले पनि कसैले नदेखेको कुराहरुको सन्धान गर्नु पर्छ र प्राप्त नतिजाहरू उजागर गरेर समाजलाई देखाइदिनु पर्छ । किनभने, कवि एक सुक्ष्म अनुसन्धाता पनि हो जुन अनुसन्धानका नतिजाहरूका आधारमा राम्रा वा नराम्रा के के भइरहेछ भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्दछ र नराम्रोप्रति प्रहार गर्दै कवितात्मक रुपमा आलोचना लेख्दछ र आलोच्यलाई सुधार्न पर्ने कुराहरु बारे थाहा दिन्छ ।
(January 18, 010)